All mkpa ka ị mara banyere Spotify Playlist
1. Spotify Ngwaọrụ
.Download Music si Spotify
.Convert Spotify ka MP3
.Alternative Maka Spotify
2. Spotify Akaụntụ
.Guide Maka Beginners
.Username & Paswọdu
.Sign Na Spotify
.Spotify Adịchaghị Android
.Na Spotify mgbasa ozi
.Spotify Onyinye Kaadị
.Spotify Ndenye aha
.Spotify Nweta nkwalite
.N'ihe Spotify adịchaghị
.Site Spotify adịchaghị
.Delete Spotify Akaụntụ
.Cancel Spotify Akaụntụ
.Spotify Adịchaghị Free
.Spotify 3 Ọnwa ole na Free
.Tria Adịchaghị Free
.Spotify Maka ụmụ akwụkwọ
4. Spotify listi ọkpụkpọ
.best Spotify listi ọkpụkpọ
.share listi ọkpụkpọ
.Spotify Afọ na Music
.Spotify Desktọpụ Online
.Spotify Maka Windows
.Spotify Maka Mac
.Spotify Maka iPhone
.Spotify Ime Control
.Didie Spotify Works
Mepụta, Share, Export, Chọọ na Download Spotify Playlist
N'ihi na ndị gị ndị ọhụrụ na-Spotify na-gburugburu nwere ike iri oge ụfọdụ, ọ bụ ezie na Spotify si onye ọrụ interface bụ mma mfe iji. Ma, gịnị mere imefusị oge na ngagharị mgbe i nwere ike na-niile nke ya ebe a na ugbu a? Otú na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ adieu ayak ina malitere.
Nkebi nke 1: Mee Spotify playlist Part 2: Share Spotify playlist Part 3: Export Spotify playlist Part 4: Chọọ Spotify playlist Part 5: Download Spotify playlist Nkebi nke 6: Extra: Top iri Spotify playlist maka Christmas + ọzọ + mgbatị + na-agba ọsọ
Nkebi nke 1: Mee Spotify playlist
Ịmepụta playlist dịtụbeghị mfe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa New Playlist button na aha ndepụta dị ka ị dị ka ị chọrọ.
Mgbe i kere ndepụta na ị bụ free ịgbakwunye dị ka ọtụtụ songs dị ka ị chọrọ. Ị pụrụ ime nke site na nri ịpị chọrọ song, na-aga Tinye ka na pịa na ndepụta i chọrọ nke a song na-echekwa na.
Alternatively ị nwere ike ịmepụta a New playlist nanị site na nri na ịpị, na-aga Tinye ka na ị na-ahọrọ New Playlist.
Part 2: Share Spotify playlist
Ịkekọrịta ndepụta ọkpụkpọ gị bụ nnọọ dị mfe dị ka eke ha, ozugbo ị kere gị playlist niile ị chọrọ ime bụ pịa nri òké click na gị playlist na pịa Share.
Mgbe ahụ a mmapụta elu window ga apear ebe ị nwere ike inye nwetakwuo nkọwa banyere ndepụta ọkpụkpọ gị si ọdịnaya. Nke a bụ n'ezie kpamkpam ịnara
Ozugbo ị gụsịrị a proces ndepụta ọkpụkpọ gị ga-immeditly anya na Spotify si data isi anya maka niile ọrụ. Conveniently ezu, Spotify automaticaly eji nkà ọrụ si albums onye songs ị ji ya mere ọ dịghị dịghị mkpa ka ị na-eme ka omenala oyiyi maka gị playlist.
Nkebi nke 3: Export Spotify playlist
Oddly ezughị, e ihe ọ bụla atụmatụ (na ọ dịghị ihe ọzọ ihe mara otu) na-ahapụ gị na-akpaghị aka ịzọpụta ndepụta ọkpụkpọ gị nakwa dị ka bụla o kwere omume na ngwaọrụ gị, bụrụ na ụfọdụ n'ime ha n'amaghị ama na-ehichapu ya. Ọ bụ na-atụ anya na n'ọdịnihu dị nso ndabere nhọrọ ga-abụ dị ma site Spotify ha selves ma ọ bụ ma ọ bụghị site na nke atọ ọzọ mmepe. E nwere ugbua ụfọdụ ngwọta na internet ma ha ma na-adịghị arụ ọrụ dị ka ị ga-achọ ha ka ha ma ọ bụ na ha ma na-achọ a mkpari ego nke ọzọ software ka ha na-arụ ọrụ, na ọ dịghị na ha abụghị mara ọlị.
Anyị ngwọta bụ nnọọ mfe na naanị downside bụ na ị ga-mkpa ndabere gị playlist otu ugboro na awhile ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ka anya dị ka ị na-eme ihe ọ bụla mgbanwe.
Spotify akwado ikpuru & dobe nhọrọ ebe a dị ka mma. Ya mere ị pụrụ mfe ịdọrọ ndepụta ọkpụkpọ gị gị na desktọọpụ na nke ahụ bụ banyere ya. N'ezie ị nwere ike echekwa gị backups na ụfọdụ nchekwa ka unu wee na-ahụ na ha ọzọ mfe.
Ọ bụrụ na site ohere ọ bụla ị na-ebi ịhụ gị playlist n'ihi ihe ụfọdụ Nwela ehichapụ, ị pụrụ nanị abụọ click na gị nkwado ndabere na mpaghara gị songs ga-eweghachi ma ọ bụghị gị playlist dị ka a olu ebe ọ bụ nanị aha ndị songs a na-azọpụta. Ya mere ị ga-mkpa họrọ niile nke ndị songs (pịa CTRL + A na Spotify), pịa nri click on gị òké na ike a New Playlist na nyegharịa ya. Ruo mgbe anyị na-enweta a kwachie si Spotify ma ọ bụ ụfọdụ ngwa si ebe ọzọ, n'ihi na oge ịbụ, nke a bụ ụzọ kasị mma ndabere gị Spotify listi ọkpụkpọ
Nkebi nke 4: Chọọ Spotify playlist
E aa ụzọ ole na ole ịchọ listi ọkpụkpọ na Spotify. Otu bụ site nnọọ nanị etinye chọrọ mkpado na Search ubi na Spotify ga-akpaghị aka chọta ihe ọ bụla metụtara ya, gụnyere Listigwuọ.
Ndị ọzọ ụzọ bụ pịa na-agagharị button, wee pịa na Genres na ọnọdụ uche taabụ nke ga-enye gị anatara nke kasị eji na mkpa na mkpado banyere iche iche nke music.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ Spotify search na interface kwa ịmachi na discombobulating, ị pụrụ nanị aga http://www.listenspotify.com/ na-agbalị na gị search n'ebe ahụ. Nke a pụrụ ịbụ bara uru n'ihi na desktọọpụ ọrụ. Ọ bụrụ na e nwere ihe anyị mere na-amasị ebe a, na ihe na-ga-mma, bụ enweghi ike chọọ na playlist iji Ratings search nhọrọ nke na-adịghị adị, ma Olileanya a ga-ofu na a nnọọ obere oge.
Part 5: Download Spotify playlist
Spotify enye a tụnyere ego nke àgwà music online. The music na-mgbe ota n'ime listi ọkpụkpọ. I nwere ike ịjụ, bụ ụzọ ọ bụla ibudata Spotify listi ọkpụkpọ? Ị nwere ike offline ohere ka music playlist mgbe ị na-aghọ a adịchaghị so Spotify. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị jikwaa ibudata Spotify music ọma n'ụzọ ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe mmachi na-egwu ha n'ihi na ha bụ DRM echedoro. Ya mere, ị ga-mma chọta a ziri ezi, dị ike omume na-aka. Ebe a bụ ezi choice- TunesGo. Ọ pụrụ inyere download Spotify playlist free site ndekọ. Ị nwekwara ike igwu ebudatara music playlist-enweghị ókè. Ike na-eche iji hụ otú ọ na-arụ ọrụ? Ka ina malitere.
Ebe a bụ ihe ọzọ na ezi choice- gụgharia Audio teepu.
Akpaghị aka download Spotify playlist nọgidere
Amamihe na-aghọta song Ama
Download Spotify music na faịlụ MP3
Ịtọ oge ibudata na iyo si mgbasa ozi
Olee otú ibudata Spotify playlist
Nzọụkwụ 1 Wụnye Spotify playlist Downloader
Download ma wụnye ihe omume na kọmputa gị. Rịba ama na ị ga-ahọrọ nri onye dị ka gị onwe gị na kọmputa. Anyị ga na-windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 2 Download Spotify listi ọkpụkpọ
Mepee usoro mgbe nwụnye. Pịa Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe akuku. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Spotify na-ahụ a playlist ịchọrọ ibudata. Mgbe egwu na-akpọ, i nwere ike ịhụ ihe omume ga-amalite ndekọ n'otu oge. Play dum playlist na esepu na usoro ihe omume nwere ike kewaa abụọ songs site nkịtị oge n'etiti. Gịnị bụ ihe dị mkpa bụ na i kwesịrị na-internet aga were were.
Nzọụkwụ 3 Play Spotify listi ọkpụkpọ na ọ laa
Mgbe listi ọkpụkpọ e ebudatara, nwere ike ị chọrọ na-egwu music ke laa. Pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ na ị pụrụ ịchọta songs na SAR playlist on iTunes. Mgbe ahụ gakọrịta gị obere ngwaọrụ dị ka iPod.
N'ihi na ndị ọzọ obere ngwaọrụ dị ka Samsung ekwentị, ị nwere ike mbụ nri-pịa song ma họrọ Mepee na nchekwa ịchọta ebe music na-echekwara na kọmputa gị. Mgbe nyefee gị obere ngwaọrụ aka.
Nkebi nke 6: Extra: Top iri Spotify playlist maka Christmas + ọzọ + mgbatị + na-agba ọsọ
1. Christmas Ndetuta egwu ọkpụkpọ
N'ihi na ndị na-enwe mgbe nile a nsogbu banyere nke ụdị nke songs ndị kwesịrị ekwesị maka oyi ememe anyị weere a obere ndepụta listi ọkpụkpọ nke nwere ike igbo niile amasị, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọtụtụ n'ime ha.
Cristmas-New Afọ Eve
Oge gboo Christmas
50s / 60s Christmas
2. Party Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Ọ bụrụ na ọ dara na ị na-ahazi a ọzọ, gị na-adịghị ike mgbe bụ n'ezie music nke nkwenkwe ndị dị otú ahụ ma ọ bụ na ị dị nnọọ pụrụ iji ụfọdụ mmezi ọdịnaya, anyị ọ gbakọtara a ndepụta nke kwesịrị ekwesị mixes na remixes iji enyere gị aka inwe otutu a ọzọ na gị mpako emebibeghị. Otú ọ dị anyị amaghị ihe ndị agbata obi na-ekwu.
Mixed ọgbọ Party
3. mgbatị playlist
Inupụ gị onwe na ókè na jirichaa unu ọzụzụ unu results! Enwe ezi set nke songs na initialize ihe adrenaline rosh site na gị veins ga-enyere gị aka na-na-esonụ larịị. Nke a chịkọtara ga-bụghị naanị mezuo mkpa nke nwoke ma ọ bụ nwaanyị bụ ndị dị nnọọ chọrọ ịnọ na udi, e nwekwara compilations maka bodybuilders onye na-mgbe emeri ihe ọhụrụ oke ala.
mgbatị maka Normals
Top Tracks na mgbatị
mgbatị! (Mgbe Kwụsị Mix)
Hip iwuli elu mgbatị
mgbatị / mgbapụta UP
4. agba playlist
Mgbe ị na-n'èzí, na-elekwasị anya na gị na iku ume na-agbalị mgbe nile agbaji gị onye ndekọ. N'ihi na Ventures dị ka ndị a, anyị gbakọtara a ezi ndepụta nke dịkwa music ka unu wee na ka ị na-ịta na iwepụ ihe ọ bụla si mba ọzọ ndọpụ uche.
Na-agba ọsọ Low Tempo <140 BPM
na-agba ọsọ High Tempo> 140 BPM
na-agba ọsọ n'Ụzọ
na-agba ọsọ ka Oké Nkume 170-190 BPM
Digster na-agba ọsọ
n'elu-agba ọsọ songs.
Agba ọsọ akụrisị
na-agba ọsọ Mix (Marathon Ọzụzụ Mix)
UGBUA na-agba ọsọ 2014
Top 25 Spotify ngwa Download ugbu a
All Gị Mkpa Maara Banyere Spotify adịchaghị
Top 50 Online Radio Stations-atụ aro
Youku Downloader: Olee otú Download Youku videos
Video Download Capture maka Mac: Download Online Video iyi Mfe
Savevid maka Mac: Download Online Video na One Pịa (Yosemite gụnyere)
Olee otú Download Vh1 Videos na a Click
> Resource> Download> Mepụta, Share na Download Spotify Playlist